Taasi waa maaliyad qurux badan in English. Taasi waa maaliyad qurux badan Meaning and Somali to English Translation
Home>Words that start with T>That is a beautiful shirt>Taasi waa maaliyad qurux badan (Somali to English translation)
What does Taasi waa maaliyad qurux badan mean in English? If you want to learn Taasi waa maaliyad qurux badan in English, you will find the translation here, along with other translations from Somali to English. We hope this will help you in learning languages.
Here is Taasi waa maaliyad qurux badan meaning in English:
Fadlan sug, waxaan kuu soo gudbin doonaa
Faraxsanahay in ay maqlin
Iyada oo la eego nooca
Marka aad ka tago?
OK, yimaadaan si ay meesha ugu
Waxaa jirta fursad ah Saxansaxo baraf
Waxaan booqday Walaalahayo
Waxaan guriga ka shaqeeyaan
Waxay ku xiran tahay cimilada